Ahoana no mitazona ny gorodona volotsangana - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana no mitazona ny gorodona volotsangana
Ahitsio: Denny　2019-12-23　Mobile
Mihazona ny fidirana amin'ny foibe
Ny fikojakojana ny fidirana amin'ny atiny tsy tapaka dia afaka manova rivotra mando ao anaty sy any ivelany. Indrindra amin'ny raharaha tsy misy olona mipetraka sy maharitra mandritra ny fotoana maharitra, ny fitrandrahana anatiny dia zava-dehibe kokoa.
Fomba fanaon'ny besinimaro dia: matetika varavarana varavarankely na varavarana varavarana ahafahana manao fikaon-drivotra, na mampiasa rafi-piaramanidina sy rafi-pifindrana hamoronana tontolo maina sy madio ao anaty trano.
Fadio ny tara-masoandro sy ny orana
Ny trano sasany dia afaka miditra mivantana ny efitrano eo an-toerana amin'ny alàlan'ny tara-masoandro na ny orana, izay misy fiantraikany amin'ny fiainana amin'ny gorodona volotsangana.
Ny tara-pahazavana dia hanafaingana ny fahanterana amin'ny loko sy lakaoly, ary mahatonga ny gorodona hihena sy hamontsina ihany koa. Ataovy izay hamafa ny maina avy hatrany aorianan'ny lena ny orana, raha tsy izany, ny volotsangana dia hiteraka fanitarana sy fihodinana rehefa avy nandevina hamandoana, ary hanamboatra ny gorodona ihany koa. Noho izany dia diniho manokana ny fampiasana isan'andro.
Mialà amin'ny fahasimbana
Tsy toy ny gorodona misy lay, ny gorodona volotsangana tsy misy ravina anaovana fiarovana hiarovana azy. Noho izany, ny haavo lacquered ho toy ny haingon-trano gorodona vita amin'ny volotsangana taolana no fiarovana ny gorodona.
Ho an'ny gorodona volotsangana dia tokony hisoroka ny fiantraikan'ny zavatra mafy, fikosehana zavatra maranitra, vy vita amin'ny vy, sns. Tsy azo tehirizina ao anaty trano ny zavatra simika. Ankoatr'izay, ny fanaka ao anaty dia tokony hokarakaraina rehefa mihetsika, ary ny tongotry ny fanaka dia tokony ho voatsoaka amin'ny vy.
Ahoana ny fanatsarana ny tontolo iainana:
Ny fampiasana saribao vita amin'ny volotsangana dia afaka manatsara ny tontolo ankapobeny amin'ny gorodona anatiny, mifehy ny hamandoana anatiny, ary mamoaka ireo otrikaretina ratsy.
Ahoana no mitazona ny gorodona volotsangana Ny atiny mifandraika